Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal कोरोनाको भ्याक्सिन कहिले आउँछ ? कति पर्छ यसको मूल्य ? - Pnpkhabar.com
कोरोनाको भ्याक्सिन कहिले आउँछ ? कति पर्छ यसको मूल्य ?
एजेन्सी – पहिलोपटक कोरोना भाइरसको संक्रमण गत वर्ष डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा देखिएको थियो । त्यसपछि विश्वका अन्य देशहरूमा पनि फैलिरहेको छ ।
विश्वव्यापी, कोरोना भाइरस संक्रमण २ करोड ६६ लाख नाघेको छ । यो भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ लाख ७५ हजार भन्दा बढी रहेको छ । तर अहिलेसम्म यसको सामना गर्न कुनै प्रभावकारी खोपको विकास गरिएको छैन ।
यस वर्ष ११ अगस्टमा, रूसले कोविड–१९ को पहिलो खोप दर्ता गरेको छ । यसको नाम स्पुतनिक भि राखिएको छ । रसियाले चिकित्सा विज्ञानमा ठूलो सफलता हासिल गरेको दाबी गरेको छ ।
तर विश्वभरि धेरै देशहरूमा कोरोना खोप बनाउने प्रयास भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ३४ कम्पनीहरूले कोरोना खोप उत्पादन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सातौं चरणको क्लिनिकल परीक्षणहरू गरिरहेका छन् । एकै साथ तीन कम्पनीहरूको खोप क्लिनिकल परीक्षणको दोस्रो चरणमा पुगेको छ ।
संगठनका अनुसार १४२ कम्पनीहरूले खोप पनि बनाइरहेका छन् र अहिलेसम्म पूर्व क्लिनिकल तहमा पुगेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथनका अनुसार अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी खोप एस्ट्राजेनेकाले ठूलो मात्रामा बनाइरहेको उक्त खोप अहिलेको सबैभन्दा उन्नत खोप हो ।
कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन २०२० को मध्यसम्म उपलब्ध हुने बताइएको छ । वैज्ञानिक र सर्वसाधारणहरू यो खोप केही महिनामा आउनेमा आशावादी छन् । तर उनीहरू अब मूल्यको विषयमा चिन्तित छन् ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको भ्याक्सिन कम्पनी एस्ट्रजेनेकाले कम लागतमा मानिसहरूलाई कोरोना खोप प्रदान गर्ने बताएको छ ।
कम्पनीका प्रमुखले गत महिना मेक्सिकोमा भनेका थिए कि ल्याटिन अमेरिकामा भ्याक्सिनको मूल्य प्रति डोज ४ डलर भन्दा कम हुनेछ ।
भारतमा यो खोप ठूलो मात्रामा बनाउने सेरम इन्स्टिच्यूटले भारत र विकासशील देशहरूका लागि यस खोपको मूल्य तीन डलर अर्थात २२० भारु पर्छ । यसको नेपाली रुपैयाँ ३५२ पर्ने बताइएको छ ।
साथै उक्त खोपको मूल्य युरोपमा प्रतिडोज २.५ युरोसम्म पर्ने इटलीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फ्रान्सको सनोफी पाश्चर कम्पनीका प्रमुख ओलिवियर बोगिलोटले विकास गरेको कोरोना खोपको मूल्य प्रतिडोज १० युरो पर्ने बताइएको छ । यसको नेपाली रुपैयाँ १४४० भन्दा कम हुने बताइएको छ ।
साथै चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप को मूल्य एक हजार चिनियाँ युआन पर्ने बताइएको छ । चीनको औषधि कम्पनी साइनाफार्मका प्रमुख लिउ जिङगजेनले उक्त खोप चाँडै बजारमा आउने बताए । यसको नेपाली मूल्य करिब १६ हजार पर्नेछ ।
त्यस्तै मडर्ना कम्पनीले गत अगस्टमा उत्पादन गरेको खोपको प्रतिडोज ३३ देखि ३७ डलरसम्म पर्ने बताएको छ ।
यस वर्ष जुलाईमा, अमेरिकी सरकारले कोरोना खोपका लागि फिशर्स र बायोएन्टेक कम्पनीसँग १.९७ अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
फायरफार्ममा प्रकाशित प्रतिवेदनमा एसभीबी लेरिन्क विश्लेषक जियोफ्रे पोरजेसले फिजर र बायोनटेकले उनीहरूले एमआरएनए आधारित कोरोना खोप अमेरिकी सरकारलाई प्रति डोज १९.२० डलरमा बेच्ने बताएका छन् ।
जसबाट उनीहरुले ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म फाइदा लिन सक्नेछन् । एक व्यक्तिलाई एक डोजमा ४० डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने बताइएको छ ।